Olole sare loogu qaadayo waxbarashada oo ka socda Degmada Godinlabe (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Olole sare loogu qaadayo waxbarashada oo ka socda Degmada Godinlabe (Sawirro)
Arimaha Bulshada Wararka Galmudug Wararka Maanta WAXBARASHADA
December 8, 2016 December 8, 2016 admin373
Magaalada Godinlabe ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka socda olole sare loogu qaadayo heerka ardada ku biiraysa waxbarashada aas aasiga ah. Ololahan oo ay fulinayaan Gudiga Iskuulada deegaanka Godinlabe iyo maamulka Mu’asasada waxbarashada ee Iftiin ayaa la doonayaa in sare loogu qaado tirada carruurta ku biiraysa waxbarashada aas aasiga ah.
Ardada hadda dhigata Isbuulada hoose, dhexe iyo sare ee magaalada Godinlabe ayaa ka qayb qaadanaya ololahan, si waalidiinta aan wali Carruurtooda aan iskuulada gaynin loogu dhiiri galiyo inay waxbarashada u diraan. Mukhtaar Macalin Sayid Axmed oo ka mid ah gudiga waalidiinta Iskuulada ayaa sheegay in olohooda oo in muddo ah soo socday hadda uu miro dhalay.
Maamulaha Iskuulada Iftiin ee magaalada Godinlabe Maxamed Xaaji Xuseen ayaa sheegay in sanadkan ololohoodu ku wajahanyahay dadka waawayn xitaa in waxbarashada lagu soo biiriyo. Maxamuud Maxamad Jaamac ilkacase agaasimaha mu’asasada waxbarashada ee Iftiin ee gobolada dhexe ayaa sheegay in dadaalkooda ay wadayaan ilaa laga waynayo dhalaan gaaray heerka waxbarashada oo aan helin xaqiisa waxbasho.
Sanadihii u dambeeyay waxaa sare u kacay tirada ardada waxka barata Iskuulada magaalada Godinlabe, iyadoo dufcaddii ugu horaysay ay dhawaan dugsiga sare dhamaynayso.
W/Diyaariyey: Diirshe Cadde
Up to 1,750 ISIS jihadists have returned to Europe with orders to carry out attacks
Akhriso: Qodobadii kasoo baxay Shirii Madasha Qaran ee Muqdisho kusoo idlaaday
Amniga Gobolka Hiiraan oo laga shiray